Addegga VISA Card oo Muqdisho la keenay | Jubbaland Media Online
Addegga VISA Card oo Muqdisho la keenay
Posted on March 28, 2016 in Arrimaha Bulshada, Feat, Wararka // 0 Comments
Madaxa hawlfulinta baanka Premier Cabdirisaakh Maxamad Axmad
Baanka Premier ee Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay kahirgaliyay wadankaasi adeega kaararka lacagaha lagula baxo ama wax lagu iibsado ee VISA.
Adeegan ayaa u saamaxaya qof kasta oo Soomaaliya jooga oo haysta Card Visa ah inuu lacagaha kala baxo mashiinnada lacagta ee Bangiga Premier ee Soomaaliya, iyo dunida oo dhan, sidda uu sheegay madaxa hawlfulinta baanka Premier Cabdirisaakh Maxamad Axmad.
“Adeegan waa markii ugu horreysay oo Soomaaliya laga hirgaliyo, waxaana dadka wata kaararka VISA ee immaanaya Soomaaliya in lacag ay kala bixi karaan ATM-yada bangiga Premier iyagoo wata kaararka VISA”ayuu yiri Cabdirisaakh Maxamed Axmed.
Wuxuu sheegay in arrintan ay ku suurtashay kaddib markii heshiis uu dhexmaray bangiga Premier iyo Shirkadda VISA.
Mar la weydiiyay dadka aan heesan VISA ee ku sugan dalka sidda ay ku heli karaan adeegan wuxuu sheegay in dadkaas loo sameeyay adeegyo sidda kan Master Card la yiraahdo oo horrey ay u soo kordhiyeen.
Wuxuu sheegay adeegii horre ee Master Card-ka ay dad badan ku faa’ideen isla markaana ay bangiga ku ammaaneen dedaalka uu muujinaayo maadama si Online ay wax ku iibsanayaan iyagoo isticmaalaya adeegga VISA Card.
Si kastaba, Bangiga Premier ee Soomaaliya ayaa horrey u hirgeliyey adeegyo ay ka mid yihiin kaarka lacagaha lagu bixiyo ee Master Card ayaa hadda bilaabay adeegga kaarka ee VISA Card.
Adeegan ayaa u saamaxaya qof kasta oo Soomaaliya jooga oo haysta Card Visa ah inuu lacagaha kala baxo mashiinnada lacagta ee Bangiga Premier ee Soomaaliya, iyo dunida oo dhan.
adaxa hawlfulinta baanka Premier Cabdirisaaq Maxamad Axmad